Luz de Maria-Ubomi abusoze bufane kwakhona-Ukubalwa ukuya eBukumkanini
ISt	NguLuz de Maria de Bonilla Nge-1 kaSeptemba, 2020:
Umnqweno wam kukuba intsikelelo kaThixo Oyingcwele eNgcwele ingagalelwa kuBantu babo, ukuqinisa ukholo kuye ngamnye wabantwana babo, ukuba banqwenela ukuyifumana.
Lifikile ixesha apho ukuthobela kubalulekile kuguquko; ngaphandle kwenguquko, uthando luyintaba ephakame kakhulu, kunzima ukuyinyuka. Umntu ulibele ukusebenzisa ubuhle; Akazi ukuba kufuneka azenze rhoqo, kuba ezinye iimpawu ezintle ziyavela (cf. I Tim 6:11).
Lifikile ixesha apho ukholo lubalulekile ukuze ungagungqi, okanye ulinde ungonganyelwa (cf. Heb. 11: 6), kodwa ngokuchaseneyo, ukuze uqonde kwaye ubone ngokucacileyo ukuba kwenzeka ntoni. Ukuhlaselwa kwendalo ayisiyonto yenzekileyo, kanye njengoko izibetho umntu azenzileyo ngenxa yekratshi ayizizo ezenzekileyo. Zonke ezi zinto zidibene ziziphumo zomsebenzi nezenzo ezimbi zomntu, zibonisa umzuzu wokulungiselela ngokwasemoyeni.
Abantu bakaThixo: Uyazondla ukuze ugcine umzimba uphilile; ngokufanayo, ngaphandle komthandazo, inguquko kunye nokondliwa kwe-Ekaristi, awunakufumana iNdlela, iNyaniso kunye noBomi.
Xa ungenakufumana uKumkani wethu kunye neNkosi uYesu Krestu ngokungcwele, cf. Kwi-Ekaristi Engcwele… ungamfumana ngaphakathi kweso sikhongo sangaphakathi sobuncwane (cf. II Kor 4: 7) apho ukuxabisa ukutya okuNgcwele, kwaye ungcamle ukuze ungabi buthathaka.
Lumka: uMtyholi nemikhosi yakhe ejinga phezu koluntu esazi ukuba akufuneki aphulukane nethuba lokuhlutha imiphefumlo, kwaye ndibona abantwana bakaThixo abaninzi behlala bewela kwimigibe yobubi, beboyisile kwaye bebakhokelela ekucingeni ukuba kwenzeka ntoni yeyokwexeshana.
Ubomi abusoze bufane kwakhona! Ubuntu buye bayithobela imiyalelo ye-elite yehlabathi kwaye eyokugqibela iya kuqhubeka ngokutyakatya uluntu, ikunika kuphela ixesha elifutshane lokuphumla.
Abantu bakaThixo banekratshi; ICawe yoKumkani weNkosi yethu kunye neNkosi uYesu Krestu iyazidinisa ingazi nokuba iphile njani kuMoya - awuqondi kwaye ngovuyo wamkela izinto ezingeyonyani (cf. Gal. 1: 8-9), ukwala ukuthanda kukaThixo.
Umzuzu wokuhlanjululwa uyeza; isifo siya kutshintsha ikhosi kwaye sibuye sivele kulusu Kwabo banomdla, iwebhusayithi yeLuz de Maria ibonelela ngoluhlu lwezityalo ezingamayeza Apha…. Ubuntu buya kuwa buphinda phinda, buhlatywa sisayensi esetyenziswa gwenxa kunye nomyalelo omtsha wehlabathi, ozimisele ukunikezela inert kuyo nayiphi na imeko yokomoya enokubakho eluntwini.
Abantu bakaThixo: Esi sizukulwana kufuneka sihlale siqubude ngobuso baso emhlabeni phambi kwenceba kaThixo. Umntu akafanelekanga kuMthetho oyiNgcwele.
Thandazani, bantwana bakaThixo, thandazelani abo batshutshiswayo.
Thandaza Abantu bakaThixo, thandazela ukuba isazela somntu sivuke kwaye singamthobeli uMtyholi.
Thandaza Abantu bakaThixo, thandazela abo bafa bekwimeko yesono, abo bashiya uKumkani wethu kunye neNkosi uYesu Krestu.
Bantu bakaThixo, umhlaba uya kunyikima kunanini na ngaphambili kwaye uluntu luza kubhideka zizinto ezifunyaniswe yinzululwazi, ethi, ngaphandle kokuqiniseka, izakuthiwe thaca kuwe, idilize ukholo lwabantwana bakaThixo.
Musa ukoyika: yonke iMikhosi yasezulwini ilindele uMyalelo kaThixo ukuba ulungiswe rhoqo.
Njengabantu bakaThixo, ugcina ingqalelo ekhethekileyo kuYise; abathembekileyo baya kuhlala boyisa. Nokuba bambalwa, baya kuhlala bethembekile kude kube sekupheleni kwedabi. Ngaphantsi komyalelo weKumkanikazi kunye noMama wethu siza kuza ukuhlangula iNtsalela eNgcwele.
Musa ukoyika! Musa ukungakhathali ngokwazi ukuthanda kukaThixo phambi kwabazalwana bakho: unokuwela emgibeni. U-Queen kunye noMama wexesha lokugqibela, bamba ngaphakathi kwentliziyo yakho abo bakhala kuwe.
Ngekrele lam ndivula indlela yokuba uhlale kuthando lukaThixo.
cf. Kwi-Ekaristi Engcwele…
Kwabo banomdla, iwebhusayithi yeLuz de Maria ibonelela ngoluhlu lwezityalo ezingamayeza Apha…
← Pedro Regis - Isicwangciso…
UGisella Cardia - Isilumkiso… →